Maayarka magaalada Nairobi oo maanta Maxkamad la hor-keenay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maayarka magaalada Nairobi oo maanta Maxkamad la hor-keenay
Maayarka magaalada Nairobi oo maanta Maxkamad la hor-keenay
Nairobi (Halqaran.com)- Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa maanta waxaa maxkamadda la horkeenay Maayarka magaalada Nairobi isaga oo lagu soo eedeeyay falall dambiyeedyo fara badan taasi oo keentay in xabsi loo taxaabo todobaadkan gudahiisa.
Mike Sonko ayaa gaashaanka u duruuray Eedeyntii loo soo jeediyay asaga oo diiday inuu qirto dambiyadaasi gaaraya ilaa 30 eedeeymo.
Maayarka ayaa diiday inuu qirto dhamaan dambiyada lagu soo eedeeyey markii la horkeenay maxkamad qaabilsan la dagaalanka musuq maasuqa ee uu xaakimka ka yahay Douglas Ogoti iyadoo ammaankana ay sugayeen booliska rabshada ka hortaga.
Qaar kamid ah Qareennada dowladda ayaa ka hor akhriyey Maxkamadda, War Bixin faahfaahsan oo ah Akoonnada bangiyada ee Sonko iyo dhowr mar oo lacago ay ku soo shubeen qandaraasleyaal ku guuleystay tartanka qandaraas ee gobolka uu maamulo Sonko.
Ma ahan markii ugu Horeysay ee Saraakiil iyo Xubno Ka tirsan Dawlada kenya la gu soo eedeeyo Musuqmaasuq.
Maayarka Nairobi oo maxkamad la soo taagay